Ahoana ny fizarana ny toerana misy anao ao amin'ny iOS | Vaovao IPhone
Ny ankamaroantsika, amin'ny ankapobeny, dia saro-piaro amin'ny fiainantsika manokana, na farafaharatsiny tokony hisy izany, na dia mitsidika tambajotra sosialy aza isika dia afaka mahita fa tsy izany no izy amin'ny tranga sasany. Fa rehefa miresaka momba ny toerana misy antsika isika dia afaka miova ny toe-javatra. Afaka mamoaka sary amin'ny toerana misy anay izahay amin'ny Facebook sy Twitter amin'ny fotoana voatondro, raha mety misy ifandraisany amin'ny mpihaino antsika ilay toerana.
Ny toerana misy ny fitaovana miorina amin'ny iOS dia tena ilaina raha tsy mahita ny fitaovantsika isika na satria very izany na satria nangalatra. Amin'ny tranga roa dia afaka manao izany isika ampiasao ny serivisy iCloud, hahitanao ny toerana misy ny fitaovanay na ny toerana farany nampitain'ny fitaovana alohan'ny namonoana na lany ny bateria.
Saingy tsy afaka mampiasa azy io fotsiny isika amin'izany. Ao anatin'ny fikirakiran'ny iOS (raha mbola manana fitaovana maromaro isika) azontsika atao ny manova ny toerana tiana hozaraina. Mba hanomezana ohatra mba hahafantaranao: mahita ny tenako miaraka amin'ny iPhone amin'ny lalao baolina kitra aho saingy efa nolazaiko tamin'ny vadiko fa ao amin'ny birao aho. Mba hanamafisana dia afaka mandefa anao ny toerana misy ahy aho, fa amin'ity tranga ity dia hampiasa ny toerana misy ny iPad hizara azy aho.
ao anatin'ny Fikirana tsindrio eo Privacy, hita any amin'ny faran'ny sakana fahatelo.
Ankehitriny dia tsindrio ny safidy voalohany misy toerana. Mba hanatanterahana an'io dingana io dia ilaina ny mampandeha azy io.
Ao amin'ny menio manaraka dia kitiho eo Zarao ny toerana misy ahy ary avy eo miditra avy amin'ny.
Ny efijery manaraka dia hampiseho ireo fitaovana finday rehetra nifandraisanay tamin'ny kaontinay Apple. Mila fotsiny isika safidio ny fitaovana tiantsika handefasana ny toerana aiza no misy antsika, raha mbola tsy eo akaikintsika io, raha tsy izany tsy mitombina ny fanatanterahana izany hetsika izany.
Ny fahafaha-mizara ny toerana misy anay (raha vantany vao nanova azy izahay) dia azo atao ihany amin'ny fampiharana Hafatra ary tadiavo ireo namako.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fampianarana sy torolàlana » Ahoana ny fomba hizarana ny toerana amin'ny iOS